အဘယ်ကြောင့်သင်၏အရောင်းလူမှုရေးအပေါ်မဟုတ်ပါ? | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, အောက်တိုဘာလ 29, 2012 တနင်္လာနေ့, အောက်တိုဘာလ 29, 2012 Douglas Karr
မကြာသေးမီကပြုလုပ်သောကွန်ဖရင့်၌ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်တစ် ဦး သည်ကျွမ်းကျင်စွာကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ခြင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် အခန်းအလုပ်လုပ်။ ကွန်ဖရင့်၌နွေးထွေးစွာတက်ရောက်သူစာရင်းရှိသော်လည်းသူတို့သည်သူတို့သည်အလွန်ကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်နေကြသည်။ Marty ကသူတို့နှင့်စကားပြောသောအခါအွန်လိုင်းအရောင်း ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများနှင့်သူနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အတွက်လူမှုရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်မရှိကြောင်းသူသတိပြုမိသည်။ သူပြန်လာပြီးသည့်အခါသူတို့အားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအသိပေးပြီးသူတို့ကိုရိုးသားစွာနဲ့ရောင်းအားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသင်းကတကယ်မဟုတ်ပါဟုပြောခဲ့သည် လူမှုရေး.
LinkedIn သည်အလုပ်ရှုပ်နေပုံရသော်လည်း Facebook သည်ကောလိပ်ကျောင်းသားများနှင့်စကားလုံးအတွက်ပင်ဖြစ်ဟန်တူသည် tweeting ရယ်စရာကောင်းကောင်းထင်ရနိုင်သည့်ဤအရာများသည်သင်တွေ့ရှိနိုင်သောအကြီးမားဆုံးအွန်လိုင်းကွန်ဖရင့်များဖြစ်သည်။ ရှိပါတယ် ဘီလျံပေါင်းများစွာ သင်၏အွန်လိုင်းကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမည်သည့်နေ့တွင်မဆိုရှာဖွေရန်၊ သင်၏ကုမ္ပဏီအကြောင်းမေးမြန်းခြင်း၊ နောက်ထပ် သူတို့အော့ဖ်လိုင်းလိုထက်။
LinkedIn ရှိစက်မှုလုပ်ငန်းအုပ်စုများ၊ Facebook ရှိစက်မှုလုပ်ငန်းစာမျက်နှာများ၊ တွစ်တက်စ်များ၊ တွစ်တာတွင်တိုက်ရိုက်လွှင့်ထားသော Twitter အစည်းအဝေးများနှင့် hashtags သည်သင်၏အရောင်းအဖွဲ့များကိုကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းအလားအလာများကိုရှာဖွေခြင်းအတွက်မယုံနိုင်စရာအခွင့်အလမ်းကိုပေးသည်။ ဘာကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာအကုန်အကျခံပြီးသင့်ရဲ့အရောင်းအဖွဲ့ကိုကွန်ဖရင့်တစ်ခုမှာပို့ပေးခဲ့လဲ။ ဒါပေမယ့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုလျစ်လျူရှုခဲ့တာလား။ ဒါကဒီနေ့ခေတ်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲ။ အခွံမာ။
တစ်ခုရှိသည် ဆိုရှယ်မီဒီယာမူဝါဒ သင်၏အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များသည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်၊ မည်သူကိုခွင့်ပြုထားကြောင်းနှင့်အွန်လိုင်းအကြောင်းပြောဆိုရန်ခွင့်ပြုခြင်းမရှိကြောင်းနှင့်သေချာစွာစစ်ဆေးပါ။
ပြည့်ပြည့်ဝဝဖြည့်စွက်ပါ သင်၏ပရိုဖိုင်း ပြီးတော့တကယ့်ဓာတ်ပုံတစ်ခုထည့်ပါ။ သင့်ကုမ္ပဏီအားသင်၏အရောင်းကိုယ်စားလှယ်အတွက်သာမြေပြင်စာမျက်နှာတစ်ခုထားရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။
ရှာရန် စက်မှုလုပ်ငန်းအုပ်စုများ LinkedIn အပေါ်။ လှုပ်ရှားမှုများစွာရှိသောအသင်းဝင်များစွာနှင့်အဖွဲ့များကိုပူးပေါင်းပါ။ စကားပြောဆိုမှုမှတန်ဖိုးထည့်ပါ။
မရောင်းနဲ့! သင်သည်ကွန်ဖရင့်၌တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်တက်။ သူတို့ကို ၁၄ ရက်ကြာရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းကိုမကမ်းလှမ်းပါ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်မလုပ်ပါနှင့်။ သင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပိတ်ရန်သင်၏တန်ဖိုးကိုထောက်ပံ့ရန်နှင့်သင်၏ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုနှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်အွန်လိုင်းနှင့်မတူပါ။
အငြင်းပွားဖွယ်ရာကိုရှောင်ပါ။ ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ သံသယဖြစ်ဖွယ်ဟာသ - ဤအရာအားလုံးသည်သင့်အားရုံးတွင်းပြtroubleနာများဖြစ်စေနိုင်ပြီးအွန်လိုင်းမှသင့်ကိုလုံးဝဒုက္ခရောက်စေနိုင်သည်။ နှင့်အွန်လိုင်းအမြဲတမ်းပါ!
မထားနဲ့ နေပြည်တော် ပြိုင်ပွဲ။ အရသာမရှိဘူး၊ စီးပွားရေးလုပ်မယ် သူတို့၏ပျော်ရွှင်သောဖောက်သည်များနှင့်ဖောက်သည်များသည်သူတို့၏ကယ်ဆယ်ရေးဆီသို့လာကြပြီးသင့်ကိုလှုပ်ခတ်သွားသည်နှင့်အမျှသင့်ကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ပေး အစဥ္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတတ္မႈအတြက္ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ရန္။။ လူများကိုသင်၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုစာမျက်နှာသို့ပို့ရန်မလုံလောက်ပါ။ ပြpersonalနာကိုစနစ်တကျကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတာ ၀ န်ယူခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတစ် ဦး ကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းကကွန်ယက်ကိုသင်နှင့်သင်၏ဖောက်သည်များကိုမည်မျှဂရုစိုက်သည်ကိုအထင်ကြီးစေလိမ့်မည်။
မလုပ်ပါနဲ့ ဆက်သွယ်ပါ အလားအလာ။ သင့်ရဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုလိုက်နာပါ။ သူတို့အကြောင်း၊ သူတို့၏နည်းဗျူဟာများနှင့်သူတို့အသိုင်းအဝိုင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာနိုင်ရန်။ သင်၏ကွန်ယက်ကိုမိတ်ဆက်ရန်ကူညီနိုင်သောစက်မှုလုပ်ငန်းအတွေးအမြင်ခေါင်းဆောင်များကိုလိုက်နာပါ။ သင်၏ဖောက်သည်များကိုလိုက်နာပါ။ ထို့နောက်သူတို့နှင့်သိကျွမ်းရန်အလားအလာကိုလိုက်နာပါ။
သင်၏အရောင်းမဟာဗျူဟာသည် ၀ င်လာသည့် ၀ င်ငွေများကိုစောင့်ဆိုင်းရန်၊ ခဲယဉ်းစာရင်းများမှတစ်ဆင့်ဖုန်းခေါ် ဆို၍ လာမည့်ညီလာခံကိုစောင့်ရန်နှင့်စီးပွားရေးကဒ်များကိုစုဆောင်းရန်ဖြစ်လျှင်သင်ဝယ်လိုအားရှိသောနေရာကိုရောင်းရန်သင်၏အခွင့်အလမ်းများကိုအကြီးအကျယ်ကန့်သတ်ထားသည်။ သင်၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက် ၀ ယ်လိုအားသည်အွန်လိုင်းတွင်ရှိနေသည်။ သင်နှင့်ဖြစ်စေ၊ မပါဘဲဖြစ်စေစကားစမြည်ပြောဆိုခြင်းသည်သင်၏ပြိုင်ဘက်များနှင့်ပိုဆိုးသည်။ သငျသညျသူတို့အားစကားပြောဆိုမှုများအတွက်ဖြစ်သင့်သည်။ သငျသညျသူတို့အားအရောင်းရတဲ့ရပါမည်။